“လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ (ဒု) | Layma's World
« “လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ(ပ) “အပယ်ရတနာ” ၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်… »
သန့်ဇော်မင်း, on August 26, 2007 at 4:21 am said:
ဖြောင်း.. ဖြောင်း.. ဖြောင်း..
ဟုတ်ကဲ့.. မမလေးလေးမခင်ဗျား… အခုလိုသေသေချာချာ.. နားမလည်အောင် ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါလို့ အရင်ဆုံးပြောပါရစေ။
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘလော့ဂါများ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အထွေထွေ တောက်တိုမယ်ရ မန်နေဂျာကြီး ဦးတီဇက်အမ်ဖြစ်ပါတယ်… အခုကျွန်တော် မေးချင်တာလေးတွေကို မေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
ပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့ …. မမလေးလေးမရဲ့ post များကို ကဏ္ဍများခွဲ၍ Label များတပ်ထားခြင်းက ဘာဖြစ်လို့ သူများတွေထက် များနေရပါလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြစေချင်ပါတယ်။
ဒုတိယတခုကတော့…. ခုလို ကမ္ဘာကျော် ဘလော့ဂါကြီးတယောက်ရဲ့ ဘလော့ဇာရှင်းလင်းပွဲကို ခုလို တိတ်တဆိတ် ကျင်းပသွားရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ (တိတောင်.. မတိလိုက်ဘူး)။
နောက်ဆုံးတခုကတော့…. အရောင်တွေထဲမှာ အစိမ်းရောင်ကို ကြီုက်ပါသလား.. ကြိုက်ရင်.. ဘာကြောင့်ကြိုက်ရပါသလဲ… မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့်မကြိုက်ပါသလဲ.. ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
နောက်ထပ် အစစ်အနေနဲ့ မေးချင်တာကတော့… မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ မုန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကွာပါသလဲ.. သေသေချာချာလေး ရှင်းပြပေးနိုင်မလား… (မှတ်ချက်။ ။အရောင်တွေကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။)
ဟုတ်ကဲ့.. ခုလို.. မေးခွင့်ပြုတာ.. အလွန်အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…. ဖြောင်း.. ဖြောင်း.. ဖြောင်း..
Layma, on August 26, 2007 at 7:07 am said:
ဟုတ်ကဲ့…အလွန် အရေးပါသော တောက်တို ဦးတီဇက်အမ်ရှင့် ….
(ပ)မေးခွန်းအတွက် …. အမှန်အတိုင်းဖြေရရင် … သူများတွေနဲ့မတူဘဲ ဂေါက်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေလို့ ပါရှင့် ….၊ ကြားကောင်းအောင်ဖြေရရင်တော့ ဟိုဟာနဲ့ လဲဆိုင် …. ဒီဟာနဲ့ လဲဆိုင် … ဟိုလိုလို … ဒီလိုလို post တွေ ဖြစ်နေလို့ ပါရှင့် ….။
(ဒု) မေးခွန်းအတွက် …. တိတ်တဆိတ် ကျင်းပသွားရတာကတော့ …. လူမသိအောင် လုပ်ရတာ (ခိုးလုပ်ရတာ ) အကျင့်ပါနေလို့ ပါရှင့် ….။
နောက်ဆုံး မေးခွန်းအတွက် …. အစိမ်းရောင်ကို ကြိုက်ပါတယ် …. အကြောင်းရင်းကတော့ စိမ်းနေလို့ ကြိုက်တာပါ ….။
အစစ်တိုး မေးခွန်းအတွက် ….. မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ မုန်းတယ်ဆိုတာ ဘာကွာပါသလဲ.. သေသေချာချာလေး ရှင်းပြရရင် post တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ….တို၂နဲ့လိုရင်းဖြေရရင်တော့ ….. မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ရိုးသားပြီး ….. မုန်းတယ်ဆိုတာ အငြိုးအတေး ပါပါတယ် …။ မကြိုက်ခြင်းသည် …. လူ့ အခွင့်အရေးတရပ်ဖြစ်လို့တားမြစ်ခြင်းမပြုသင့်ပါ …. မုန်းခြင်းသည် …. အန္တရာယ်များခြင်းကြောင့် မိမိစိတ်ကို မိမိတားမြစ်သင့်သည် …. အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သော စစ်ပွဲများကို …. သင် လေ့လာကြည့်နိုင်သည် ….။ (မှတ်ချက် ။ ။ အရောင်တွေ အတွက်သာ ဖြေသွားခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် သည်းခံပါ )
မရှင်းအောင်ရှင်းထားသော ရှင်းလင်းပွဲကို နားမလည်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ကျေးဇူးတင်သွားသော UTZM ကို နားလည်စွာ ကျေးဇူးတင်ပါသည် …။ အဖိုးတန်မေးခွန်းများ အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည် ….။ အရေးတယူ မေးမြန်းသွားသည့်အတွက် အတိုင်းမသိ ခင်မင် ကျေးဇူးတင်မိပါသည် ….။
သန့်ဇော်မင်း, on August 27, 2007 at 4:43 am said:
ဟီးဟီး.. ခုလို.. တကူးတက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက်.. ကျေးဖူးတင်ရှိပါတယ်။.. မကြိုက်ခြင်းနှင့် မုန်းခြင်းအကြောင်း ခုလို ရှင်းပြပေးတာကိုလည်း အထူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Layma, on August 27, 2007 at 11:37 am said:
ဖြောင်း .. . ဖြောင်း… ဖြောင်း